Isbadal ayaa ku yimid sixirbarar saameeyey Suuqyada Magaalada Boorama iyo Ganacstada Barkhaaleyda oo Qiimaha maciisshada halkeedii Taagan . | Awdalmedia.com
Boorama ( AwdalMedia.com) Dadweynaha magaalada Boorama ee caasimada gobolka Awdal ayaa ka soo kabanaya sixir barar xoogan oo xadhkaha goostey kaasi oo naafeeyey nololmaalmeedkii bulshada danyarta ee ku nool magaalada.
Waxana isbadalkan saameeyey dhaqdhaqaaqa qiimaha sarifka hoos u dhac xoogan laga dareemayaa gabi ahaanab deegaanada kala duwan Soomaaliland
Balse ganacstada bakhaarleyda magaalada ayaa ilaa hada qiimahiisa raashinka halkiisa taagan yahey , dhibaatadan sixir bararka ayaa saameysey oo saameyn togan iyo mid taban ku yeelatey dadweynaha danyrta ah ku nool magaalada Boorama.
Bulshada ku nool magaalada Boorama oo ilaa imka kama hadlin qiimaha lagu iibiyo maciishada nololmaalmeedka oo mareysey halkii ugu sareysey .
Walaw masuuliyiinta Xukuumada ee gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama ka gaabsadeen in dabalgal iyo isla xisaabtan ku sameeyaa ganacstada bakhaaleyda ayaa iyaduna meesha ka maqan .
Sidoo kale waxa meesha ka baxdey culimo Awdiinkii magaalada Boorama ee ka hadli jirey dhibaatooyinka heysta bulshada kuna hanooni jirey dariiqa saxda .
Waxase dadweynaha magaalada Boorama ku sifoobeen kuwa aanan ka hadal isbadalada ku yimaad nolol maalmeedka mana kuwo la xisaabta ganacsatada Boorama eek u sifoobey dhiigrmiiratada .
Dadweynaha magaalada Boorama ee caasimada gobolka Awdal ayaa ka soo kabanaya sixir barar xoogan oo xadhkaha goostey kaasi oo naafeeyey nololmaalmeedkii bulshada danyarta ee ku nool magaalada.